မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: January 2012
ကလေးကဗျာများ(၂၁) - ပိုးနှံကောင် ပုံပြင်
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 16:35
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 12:29
ယဇ်ကောင် (သို့မဟုတ်) ………….
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 19:22
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 21:20
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 02:55
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 18:46
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 13:02
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 04:46
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 20:40
တစ်နေ့မှာ ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက် လိုမလဲ
အပိုင်း(၁)၊အပိုင်း(၂) နဲ့ အပိုင်(၃) ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်..
ပေ့ါပေါ့ပါးပါးလှုပ်ရှာမှု - ၅၀ % မှ ၇၀%
ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှု - ၆၅% မှ ၈၀%
ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမှု - ၉၀% မှ ၁၂၀%
၁၄၅/၂.၂ =၆၅.၉ .. ၆၆ကီလိုဂရမ် x ၂၄ = ၁၅၈၄ ကယ်လိုရီ
၁၅၈၄ x ၅၀ % = ၇၉၂
၁၅၈၄ x ၇၀ % = ၁၁၀၈.၈ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့်..ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလှုပ်ရှာမှုသာရှိတဲ့..ကိုယ်အလေးချိန်၁၄၅ပေါင်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ပုံမှန်တစ်နေ့တာအသုံးပြုနေတဲ့စွမ်းအင်ကယ်လိုရီဟာ ၁၅၈၄+၇၉၂= ၂၃၇၆ ကယ်လိုရီမှ ၁၅၈၄+၁၁၀၈.၈=၂၆၉၂.၈ ကယ်လိုရီ အထိဖြစ်ပါတယ်…ဒါဟာတစ်နေ့တာအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီဖြစ်ပါတယ်…
ပြောပြသင်ကြားပေးခဲ့သောFitWise & Nutrition (BNE) မှာဆရာဆရာမများအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်...
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 08:59
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 07:33
ဒီ Post ကလေးကတော့ဓညင်းသီးကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီတခါတော့ဓညင်းအဝက် ကားကားပွပွ ကြီးတွေလုပ်ကြည့်ကြရအောင်..
၆။ ၂ရက် ၃ရက်ကြာတဲ့အခါ လှပတဲ့ဓညင်းဝက်ကြီးကြီးလှလှတွေကိုရရှိပါပြီ…
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 05:43
၁။ ဇလုံ(သို့) ခွက်ထဲကို ပဲမှုန့် ကို 250 ml ခွက်နဲ့ ၂ ခွက်ချိန်ထည့်ပါမယ်..
၂။ ရေကို 250 ml ခွက်နှင့် ၅ခွက်ထည့်ပါမယ်..
၃။ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ ၁ပုံ ထည့်ပါမယ်…
၅။ Soda အမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ပုံ၁ပုံထည့်ပါမယ်…
၆။ အရောင်အတွက်နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပါမယ် …
၇။ အားလုံးကိုသေသေချာချာမွှေပေးရပါမယ်… Blander ထဲကိုထည့်မွှေနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်.. ပြီးတော့ဇကာစိပ်စိပ်နဲ့စစ်ချလိုက်ပါမယ်..
၈။ ရလာတဲ့ပဲအနှစ်ရည်တွေကိုအိုးထူထူထဲမှာထည့်ပြီးမီးအမြင့်နဲ့၎မိနစ်အဆက် မပြတ်မွှေပေးပါမယ်…ပဲအရည်တွေပွက်လာပြီးလျင်မီးကိုထက်ဝက်အထိချလိုက်ပါမယ်..ပြီးတော့ဆက်ပြီးမွှေနေပါမယ်..၄မိနစ်မျှကြာတဲ့အခါမှာမီးဖိုပေါ်ကချပြီးကြွေ(သို့)ဖန်(သို့)မုန့်ဗန်းထဲကို လောင်းထည့်အအေးခံပါမယ်..
အဲဒီနောက်မှာတော့အဆင်း…အနံ့….အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုဟူးကောင်းကောင်းလေးကိုရပါပြီ..သုတ်စားကြမလား…ကြော်စားကြမလား .. ကြိုက်သလိုလုပ်စားကြရအောင်…
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 17:18
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 08:28
နောက်ဒဏ်ရာကို ..ကြည့်ခဲ့တယ် …
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 16:45
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 07:12
ကြင်ယာတော်ရဲ့ အခြေအနေ …
အခက်အခဲ တွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ် ..
ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း ပြည့်သူကို ..
ဘုရင်မ မှာဖြစ်ခဲ့တယ် …
အရိပ်ပေးဖို့ ပဲကြိုးစားတယ် ….
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 06:37
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 20:38
လမ်းသစ် ... ဆီသို့
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 17:07
The Star Is Shine
The Love Is In My Mind ...
The Bird Is Fly
My Mind .. To Love You .. Try ..
Pyo Yu Wathone
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 16:48
Created for Us ..
It is full with Peace..
Whenever Night or Day ..
Now I'm Possess
Make me away from Stress...
Dress me and Mind
Sentimental In Kind ..
Space of each in Ace…
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 22:08
We don't have to cry ..
There have no Blind
Tears not for our eyes ..
Fly through to our mind ..
don't be sigh
Never let be tight ..
If sadness reach
We're the same in each ..
Friendship is grow
Never die and cold …
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 22:04
ပန်း ၊ ပျိုးပင်လေးများ …
Posted by ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) at 13:40